श्रीमती भनेपछि मरिहत्ते गर्ने यी तीन राशीका पुरुषहरु ! जो श्रीमतीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् ! – Medianp
श्रीमती भनेपछि मरिहत्ते गर्ने यी तीन राशीका पुरुषहरु ! जो श्रीमतीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १९, २०७५१४:५९0
काठमाडौँ । हरेक श्रीमान श्रीमतीको चाहना हुन्छ जीवन भर सधै खुसी र सुखी रहने । सबैको चाहना हुन्छ आफ्नो प्रेम जोडीले धेरै माया गरोस् । सधै खुसी रहन सकियोस् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशी अनुसार व्यक्तिको हरेक चाहना फरक फरक हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ज्योतिष शास्त्रले बताए अनुसार आफ्नो पत्नीलाई धेरै माया गर्ने केही राशीको बारेमा बताएको छ हेरौँ कुन कुन हुन् ती राशीहरु ।
सिंह राशि : सिंह राशी भएका मानिसहरु आफ्नो श्रीमतीको लागि जस्तो सुकै कामहरु गर्न सक्ने बताएको छ । यो राशी हुने व्यक्तिहरु निकै बफादार हुने भएकाले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी राख्न जस्तोसुकै दुख पनि सामाना गर्ने बताइएको छ । यो राशी भएका पुरुषहरु रोमान्टिक पनि हुने गर्छन् ।
मकर राशि : यो राशी भएका पुरुषहरु आफ्नो श्रीमतीलाई निकै सम्मान दिने गर्छन् । उनीहरु श्रीमतीलाई खुसी राख्नको लागि श्रीमती छोडेर अन्त जादैनन् । उनीहरु श्रीमतीको भावना छिट्टै बुझ्ने गर्छन् । आफु टाढा जानु पर्यो भने श्रीमतीलाई सँगै लैजाने गर्छन् ।
कन्या राशि : कन्या राशी भएका पुरुषहरु निकै भावनात्मक हुने गर्छन् । उनीहरुले श्रीमतीलाई अत्याधिक माया गर्ने गर्छन् । उनीहरु श्रीमतीलाई खुसी राख्नको लागि आफ्नो हरेक दुख श्रीमती बाट लुकाउने गर्छन् । कमलो मन भएका कन्या राशीका पुरुषहरु आफ्नो श्रीमतीले भनेको हरेक कुराहरु मान्ने गर्छन् ।
‘यो मन जलेको छ’ लिएर आए डाइमन्ड
यी व्यक्तिले किचनमा गरेको एक गल्तीले चम्काए आफ्नो भाग्य, यसरी बने एक्कासी कामदारबाट मालिक
पुजा गर्दा झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी काम ! जीवनभर आउने छ दुखै दुखको ब्रजपात !